Orlistat （96829-58-2 factory factorylọ ọrụ na-emepụta ndị na-ere ihe
CMOAPI nwere ngwa ngwa zuru oke nke Orlistat （96829-58-2）, ma nwee usoro njikwa njikwa mma niile, tinyekwara asambodo GMP na DMF.
Ozi Orlistat ntụ ntụ
aha Orlistat ntụ ntụ
Ụdị White crystalline ntụ ntụ
molekụla arọ 495.7 g / mol
molekụla Formula C9H7ClN2O5
Ọnụọgụ ọgwụ 30mg
nchekwa temp Ihe ngosi 2-8 Celsius C
Kedu ihe bụ ndepụta?
Orlistat bụ ọgwụ ọgwụ edere edepụtara maka ọgwụgwọ oke ibu yana njikọta kalori belata na nri nwere abụba. A na-ere ya dị ka ọgwụ eji ede ọgwụ n'okpuru aha aha aha Xenical yana kwa dị ka ọgwụ mgbochi oke ibu n'okpuru aha ahia Alli.
Orlistat bụ onye na-emechi eriri afọ nke na-egbu egbu na-arụ ọrụ ogologo oge iji gbochie nsị nke abụba. Orlistat bụ saturate ụdị lipstatin, nke bụ ihe dị irè eke pancreatic lipase mgbochi. Orlistat dị mfe ma kwụsie ike wee họrọ nke nne na nna ya lipstatin.
Orlistat na-arụ ọrụ iji nye obere ọnwụ maka oge yana yana belata abụba visceral. Otú ọ dị, a na-ejikwa ya na usoro ọnwụ ndị ọzọ dị arọ dị ka nri na-eme obere abụba na mmega ahụ. Uru ya dị ka atụmatụ ọnwụ ọ bụla ọzọ abụghị ozugbo kama ọ bụ atụmatụ dị ogologo oge, nke ndị ọrụ ahụike kwadoro.
Ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ site na igbochi nsị nke abụba ndị na-eri nri na-eme ka ewepụ ha na-agbanweghị agbanwe na nsị mmadụ, enwere nnukwu nsogbu nke ọrịa eriri afọ nke na-eme na iji ya. Mmetụta ndị a nwere ike ịghọ ihe dị egwu na mmetụta na-adịghị mma karịa na iji usoro onunu ogwu. Iji merie ma ọ bụ belata nsonaazụ mmetụta orlistat kwesịrị iwere ya yana obere nri nwere abụba yana mgbakwunye mgbakwunye multivitamin.
Kedu otu Orlistat si arụ ọrụ & Kedu ihe ọ na-eme?
A maara Orlistat dị ka onye na-eme ihe nchịkwa pancreatic na gastric lipases. Enzymes ndị a (gastric na pancreatic lipases) bụ maka mmebi nke triglycerides (abụba / lipid na ahụ) na eriri afọ.
Orlistat na-egosiputa mmetụta ya na lumen nke afọ yana obere eriri afọ. A maara Orlistat ka ọ jikọtara ya na ebe fọdụrụnụ na-arụ ọrụ nke gastric na pancreatic lipases iji mepụta njikọkọ ọnụ. Enzymes ndị a na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị ike ịnweta hydrolyze abụba na-edozi ahụ n'ụdị triglycerides n'ime abụba abụba na monogylcerides nke ahụ nwere ike itinye uche na ya n'ụzọ dị mfe.
Mgbe a na-egbochi ọrụ ha, triglycerides enwetara site na nri mmadụ anaghị agbanwe agbanwe n'ime abụba abụba nke ahụ nwere ike ịmịkọrọ. Ya mere, a na-ekpochapụ triglycerides na-agbanweghi agbanwe na nsị mmadụ. Ebe ọ bụ na anaghị agbanwe triglycerides n'ime ahụ, nke a na-ebute ụkọ caloric nke na-ekere òkè na njikwa ibu.
N'oge na-adịbeghị anya, a chọpụtawokwa na ndị na-ede aha aha dị ka ihe mgbochi nke ngalaba thioesterase nke fatty acid synthase (FAS). Enzyme, thioesterase, nwere njikọ na mmụba nke mkpụrụ ndụ kansa ma ọ bụghị na uto nke mkpụrụ ndụ nkịtị.
Ndepụta orlistat na-arụ ọrụ iji belata oke abụba etinye na sistemụ ahụ. Ya mere, ọ dịghị mkpa ka ị rie mgbe ị na-eri nri na-enweghị abụba. Ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụ orlistat ma ị rie nri na-enweghị abụba, a gwara gị ka ịpịa ọgwụ iji zere mmetụta ndị metụtara ya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị rie nri abụba dị oke elu, ị nwere ike nweta ya ma ọ bụ depụta mmetụta ndị na-adịghị mma dị ka stool stool, eriri afọ gas na mmanu mmanu.
Orlistat gosipụtara iji belata abụba visceral?
Ee, n'ezie, ndị na-ede akwụkwọ aha ha egosila na ha nwere ike belata abụba visceral. Alli (orlistat 60 mg) kwadoro ya site na nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) dị ka ọgwụ na-adịghị mma maka ịgwọ oke ibu.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ ụlọ ọgwụ egosila nke ahụ orlistat ọ bụghị naanị na-eme ka ọnwụ dị arọ kamakwa ọ na-ebelata abụba visceral. Achọpụtala ya ka ọ belata mgbada n'úkwù.
Visceral abụba a na-akpọkwa abụba na-arụsi ọrụ ike bụ ụdị abụba dị egwu nke echekwara n'ime oghere afọ nke na ọ gbara ọtụtụ akụkụ dị mkpa dị mkpa dịka imeju, eriri afọ na pancreas Ejikọtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke abụba visceral na ọtụtụ nsogbu ahụike dịka ọrịa shuga 2, ọrịa obi, ụfọdụ ọrịa kansa, ọbara mgbali elu, na ọrịa Alzheimer.
N'oge ọnwụ, abụba visceral so na abụba ndị mbụ ga-efu. Nke a na - eme ka ahụike gị dịkwuo mma site na mbenata ihe ize ndụ nke ọtụtụ nsogbu ahụ ike dịka ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, na ọrịa obi.
N'ime nnyocha metụtara ndị sonyere 26, a na-etinye 60 mg (Alli) na-edebanye aha ugboro atọ n'ụbọchị yana yana calorie belatara, obere abụba maka ọnwa 3. Nsonaazụ gosiri na, ndepụta nwere ike belata mgbatị ukwu nke bụ usoro nke abụba visceral. Ha kọrọ na 5.6% Mbelata na arọ ahụ na 10.6% Mbelata na abụba visceral.
N’ọmụmụ ihe ọzọ, e nyere mmadụ iri abụọ na abụọ na oke ibu buru aha ha ugboro atọ kwa ụbọchị maka izu iri abụọ na anọ. A dụrụ ha ọdụ ka ha na-eri nri nwere obere abụba. Mgbe ọnwa nke isii gachara, ndị sonyere ahụ kwuru na mbelata nke ịdị arọ nke 123% na mbelata oke nke abụba visceral nke 24%.
Achọpụtaghị Orlistat dị ka ihe kpatara kpatara oke imeju imeju na nnwale ọwụwa na ahụike. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-adịghị ahụkebe nke mmerụ imeju dị ukwuu ejirila kọwaa ndị mmadụ jiri aha.
Orlistat nwere ike ịkwụsị ọrụ nke enzyme dị mkpa akpọrọ carboxylesterase-2. Enzyme, carboxyleserase-2 na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ka imeju umeji, akụrụ na akụkụ eriri afọ dum. Mgbe a na-egbochi enzyme a, ọ nwere ike ibute nsị dị egwu nke akụkụ ahụ dị mkpa.
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ emeela ka mmerụ imeju siri ike dị ka nchedo nchekwa maka ndepụta. Nke a dabere na ihe gbasara 13 gbasara nbibi imeju na-esote ahịa ma ọ bụrụ na ejiri aha ndepụta.
N'ime ihe ọmụmụ ndị a na-eme, a chọpụtabeghị na ọ bụ ihe kpatara oke mmebi imeju. Agbanyeghị, ekwesighi ileghara ihe egwu nwere ike imebi anya ọnya imeju metụtara. Ọ dị mma ka ị gakwuru onye dọkịta gị mgbe niile maka ndụmọdụ kachasị mma tupu ị nara ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ.
Isi uru orlistat bụ ọnwụ ọnwụ. N'ezie, ọnwụ ọnwụ bụ ndepụta bụ isi na uru ama ama ama ọ na - emepụta ma na - ere ahịa. A na-eji ya agwọ oke ibu ma nyere aka na ọnwụ ọnwụ.
Orlistat uru bụ:
Na-emeso oke ibu
Ibu na ibu gabiga ókè na-ezo aka n’arụba ma ọ bụ oke abụba na-agbakọba n’ime ahụ. Nchịkọta a gabigara ókè nwere nnukwu ihe egwu ahụike. Ihe oke ibu bụ ahụ ike mmadụ na-agbakọkarị ka ibu gị na kilogram kewara site na square gị dị elu na mita.
A na-ejikọ oke ibu na nsogbu ahụike dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ụfọdụ ọrịa kansa na ọbara mgbali elu. Na ihu ọma, ọbụlagodi ịdị nfe dị ala nwere ike igbochi nsogbu ahụike metụtara oke ibu.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọtụtụ ndị buru oke ibu na oke ibu na-efulata site na ịlele nri ha, ibi ndụ ya na mmega ahụ. Edebere ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ na-ebu ibu iji soro ndụ ndụ dị mma dịka nhọrọ ọzọ.
Agbanye ibu, enweghi ike iru n’otu ntabi anya mana ọ na-abụkarị atụmatụ ogologo oge. Atụmatụ ọnwụ ga-abụkarị nri kwesịrị ekwesị, mmega ahụ, na ebe ọgwụ dị mkpa. A na-atụle atụmatụ ọnwụ dị ka ihe ịga nke ọma mgbe ị tufuru pasent 5 ma ọ bụ karịa nke ibu ọgwụgwọ gị tupu otu afọ. Nke a pụtara na ị ga-atụfu ihe dịka ọkara kilogram n'ime izu mbụ nke ọgwụgwọ. Ọnwụ dị obere a na-eme ka ị jide n'aka na ị ga-ebu ibu ma ọ bụ tụfuo ibu karịa ibu atụmatụ ọnwụ.
Orlistat ejiri obere kalori na nri nwere obere abụba yana mgbatị na-enye atụmatụ ọnwụ ọnwụ. Orlistat, onye na-emechi ihe na-egbu egbu, nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ abụba ị na-eri site na 25%. Orlistat na-arụ ọrụ site na igbochi egbugbere ọnụ gastric na pancreatic. Ndị a bụ enzymes nke na-agbaji abụba na-eri nri (triglycerides) n'ụdị absorbable, acid fatty or monocerides.
Mgbe a na-egbochi ọrụ nke enzymes ndị a, ahụ anaghị enwe ike ịmị calorie kama kama abụba abụba na-ewepụghị na feces. Nke a bụ akụkụ dị mkpa na njikwa njikwa.
E meela ọtụtụ ọmụmụ ihe ọmụmụ na-egosi na ịdekọ uru ndị na-abaghị uru dị ike.
N'ime nnyocha metụtara ndị sonyere 3,305 bụ ndị buru oke ibu, edepụtara aha na 120 mg ugboro atọ kwa ụbọchị maka afọ 4. E nyekwara ndị so na ya ndụmọdụ ka ha rapara na nri obere kalori na-enweghị ihe karịrị 30% nke calorie. A dụrụ ha ọdụ ka ha na-emega ahụ́ site n'ije ije kwa ụbọchị.
Nnyocha a chọpụtara na, nkezi ibu dara n'afọ mbụ bụ ihe dịka kilogram 10.6. Ọ bụ ezie na ndị sonyere ahụ nwere ibu arọ n'ime afọ atọ gara aga nke ikpe ahụ, na njedebe, nkezi ibu furu efu bụ ihe dịka 5.8 n'arọ.
N'ihe omumu ihe omumu nke ozo nke abughi ihe ruru 5% ma obu karie ibu.
Uru ndi ozo edeputara;
Orlistat Belata ihe ize ndụ nke ọrịa shuga nke ụdị 2
Diabetesdị ọrịa shuga nke abụọ ma ọ bụ ọrịa shuga mellitus bụ ọnọdụ dị njọ nke na-emetụta shuga (glucose) metabolism n'ime ahụ. Ọ na-adị ma ọ bụrụ na ahụ anyị anaghị eche banyere insulin. Insulin bụ hormone na-ahụ maka ịhazi shuga (glucose) na ahụ. O nwekwara ike ime ma ọ bụrụ na pancreas anaghị emepụta insulin zuru ezu iji jigide ogo glucose kwesịrị ekwesị n'ime ahụ.
Ọ bụ ezie na a maghị ezigbo ihe na-akpata insulin enweghi ike, oke ibu bụ otu n’ime ihe na-eweta mmepe ụdị ọrịa shuga abụọ. Symptomsdị ụdị ọrịa shuga nke 2 nwere ike ịdị mfe ileghara anya ka ha na-amalite nwayọ nwayọ, agbanyeghị, ọ bụrụ na edozighi ya nwere ike ibute nsogbu ndị ọzọ. Ọrịa shuga dị elu nke abụọ nwere ike ibute nsogbu ndị ọzọ dị ka ọbara mgbali elu, ọrịa obi na nkụchi obi. Ihe ịrịba ama ndị a na-agụnye mmamịrị ugboro ugboro, akpịrị ịkpọ nkụ na-arịwanye elu, ibu arọ na-ebughị n'uche, ike ọgwụgwụ, ọhụụ na-adịghị mma, ọrịa na-efekarị, mmerụ ahụ na-adịghị ngwa ngwa na itiri ọchịchịrị n'akụkụ ụfọdụ nke anụ ahụ dịka olu na akwara.
Orlistat bụ ọgwụ na-efu ọnwụ dị ike nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na igbochi mmalite nke ọrịa shuga 2. Actionsfọdụ ụdị omume edepụtara achọpụtara iji rụọ ọrụ na ụdị ọrịa shuga nke abụọ gụnyere ime ka insulin nwee mmetụta, belata mbadamba plasma na-abaghị uru, na-akwụsịlata ma ọ bụ na-egbochi mgbaze nke abụba ndị na-eri nri, na-ebelata abụba visceral, ma na-ebute ihe nzuzo nke glucagon-dị ka peptide-2 na obere eriri afọ.
N'ime ọmụmụ ihe ya na ndị buru oke ibu, a na-edebanye aha yana usoro ndụ dị mma (nri na-adịghị abụba na mmega ahụ) iji belata ụdị ọrịa shuga 2. Ọ rụpụtakwara nnukwu mbibi.
E duziri ọmụmụ ihe ọzọ na ndị buru oke ibu ma ọ bụ buru ibu na-arịa ọrịa shuga nke ụdị 2. Orlistat 120 mg e tinyere ya ugboro atọ kwa ụbọchị maka ọnwa isii ma ọ bụ ọnwa iri na abụọ.
A choputara na ewezuga ma ọ bụ depụta mmetụta ọnwụ, orlistat nwere ike melite njikwa glycaemia. Ọnọdụ glycaemia ka mma bụ mbelata nke glucose plasma na-ebu ọnụ (FPG) na hemoglobin A1c (HbA1c). Nchịkwa glycaemia ka mma bụ nnwere onwe nke ọnwụ.
Orlistat Nwere ike belata ọbara mgbali elu
Ọbara mgbali elu a makwaara dị ka ọbara mgbali elu bụ ọnọdụ ahụike na-eme mgbe ọbara mgbali elu gị na-abawanye n'ọkwa dị elu nke ukwuu na mgbe mgbe na ogo ahụike. Ọbara ya na-arị elu mgbe akwara ya warawara.
Ogologo oge ikpughe na ọbara mgbali elu nwere ike ibute ọnọdụ na-adịghị ala ala nke na-emetụta akụkụ ahụ dị mkpa dịka obi, akụrụ anya ọ bụla. Ihe mgbaàmà kachasị nke ọbara mgbali elu bụ isi ọwụwa, ịba ụba noose, mgbanwe ọhụụ, anya nju, obi mgbu, ume iku ume na ọbụna ọbara na mmamịrị.
Orlistat nke bụ onye na-egbochi egbugbere ọnụ na-enyere aka igbochi absorption nke abụba na-eri nri nke na-egbochikarị akwara. Orlistat nwere ike belata ọbara mgbali elu na-emekarị n'ihi oke ibu.
N'ime nnyocha metụtara 628 buru oke ibu ma ọ bụ ndị buru oke ibu na-arịa ọbara mgbali elu, a na-enye ndepụta aha na 120 mg ugboro atọ n'ụbọchị maka otu afọ. Ndị ọrịa a nwere nrụgide diastolic na-enweghị nchịkwa nke nrụgide systolic dịpụrụ adịpụ. Na mgbakwunye na ndenye aha ederede, ndị ọrịa anyị nyere ndụmọdụ ka ha debe nri nwere obere abụba maka oge ahụ.
Ọmụmụ ihe ahụ kọrọ oke ọnwụ dị oke mkpa yana mbelata ma ọbara mgbali elu nke diastolic na nke dịpụrụ adịpụ. Ha dekọtara -9.4 mmHg Mbelata na ọbara mgbali elu systolic na -7.7 mmHg mbelata na nrụgide diastolic.
Nke a na-egosi na enwere ike iji aha ndepụta na njikwa ọbara mgbali elu na ndị buru oke ibu ma ọ bụ buru ibu.
Obere mbelata ọbara mgbali elu a jikọtara ya na iji ogologo oge mee ihe na ndepụta yana obere kalori na mmega ahụ.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, a chọpụtara na iji akara edebanye aha nke orlistat belata ntakịrị ọbara mgbali site na mbelata nke 2.5 mmHg nke systolic pressure na 1.9 mmHg nke ọbara mgbali.
Orlistat Na-ebelata ngụkọta na LDL cholesterol
A na-akpọkarị cholesterol lipoprotein (LDL cholesterol) dị ala ebe ọ na-agbakọta na mgbidi arịa ọbara si otú a na-abawanye ohere gị nke nsogbu ahụike dịka ọrịa obi na ọrịa strok.
Mkpokọta cholesterol nwere obere lipoprotein (LDL) na cholesterol dị elu (HDL). Ọkwa dị elu nke kọlestrọl dị elu karịa ihe egwu nke nsogbu obi.
Enweela Orlistat ka ọ belata LDL cholesterol na mgbakwunye na uru ọ na-aba.
N'ime nyocha metụtara ndị ọrịa buru oke ibu ma ọ bụ nke buru oke ibu, enyere orlistat na ọgwụ nke 120 mg ugboro atọ kwa ụbọchị maka izu 24. Ndị ọrịa ahụ nwere BMI (nchịkọta anụ ahụ) nke 27-40 kg / m2 na hypercholesterolemia (obere-density-lipoprotein cholesterol, LDL-C, 4.1-6.7 mol / l).
Achọpụtara Orlistat ka ọ belata oke ibu yana ngụkọta na LDL cholesterol. E gosipụtara n'ihu na mmetụta LDL cholesterol na-agbadata na-adabere na uru ọnwụ. N'ime ihe ọmụmụ a, a nabatara ndepụta aha ọmụmụ a na-enweghị oke ihe omume nke eriri afọ.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, e nyere ndị mmadụ 448 nwere oke cholesterol dị elu na 120 mg ugboro atọ kwa ụbọchị maka ọnwa 6. E nyekwara ndị ọrịa ahụ iwu ka ha rapara na kalori na nri bekee. Nke a rụpụtara nnukwu ọnwụ dị nro na ọnwụ nha nke kilogram 7.4. N'otu aka ahụ, e nwere mbelata dị ukwuu na cholesterol zuru oke na cholesterol dị nro dị ala site na 25-30 mg / dL.
Ha kwukwaziri na orlistat cholesterol lowering effect is dependent from the orlistat tụọfu iya mmetụta.
Mkpakọrịta ọgwụ na-ezo aka n'otú ọgwụ dị iche iche si emetụta ma ọ bụ na-emetụta ndị ọzọ. Mkparịta ụka ọgwụ ndị a na-emetụta ụzọ ọgwụ ndị ọzọ si arụ ọrụ ma nwee ike ịbawanye nsonaazụ nke mmetụta ndị na-adịghị mma metụtara ojiji nke otu ọgwụ. Achọpụtala mmekọrịta Orlistat na ọgwụ ndị ọzọ.
Ewezuga mmekọrịta na ọgwụ ndị ọzọ, a kwadoghị orlistat maka ndị inyom dị ime ma ọ bụ ndị na-enye ara ara. Ọ bụghị maka ụmụaka toro afọ iri na abụọ ka eji ya.
Ọ bụ ihe amamihe dị ukwuu idebe ndepụta nke ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ yana igosipụta onye nlekọta ahụike gị mgbe niile maka ndụmọdụ kachasị mma na mmekọrịta gị na ya. Mmekọrịta ọgwụ ndị a edepụtara nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ ike gị karịa ịre uru ọ bara. Ya mere, elegharala mmekọrịta ndị a anya kama kpachara anya.
Offọdụ n'ime mmekọrịta mmekọrịta a ma ama bụ;
Orlistat na mmekorita nke ọbara
Ndị na-eme ka ọbara dị njọ bụ ọgwụ eji agwọ ụfọdụ ọrịa obi na ọnọdụ nke na-etinye gị n'ihe ize ndụ nke mkpụkọ ọbara dị ize ndụ. Ha na-enyerekarị ọbara aka ka ọ na-aga were were n’ọnụ n’ime ọbara. Ọ na-egbochi mkpụkọ mkpụkọ site n'ịkpụ ma ọ bụ ibu ibu.
Ndị na-edozi ọbara a gụnyere warfarin, heparin, apixaban, dabigatran na rivaroxaban n'etiti ndị ọzọ.
Orlistat nwere ike belata absorption nke vitamin K. Vitamin K bụ otu ìgwè nke ogige dịka Vitamin k1 na vitamin K2. Vitamin K na-arụ ọrụ dị oke mkpa na-enyere ọbara aka ịkọkọ ma gbochie oke ọbara ọgbụgba. Mgbe ntinye ya pere mpe, ị ga-agbakarị ọbara ọgbụgba. Nke a bụ ihe mere ị na-eji ihe ndị na-eme ka ọbara na-emekọ ihe ọnụ na ndepụta na-eme ka ohere ị na-agbafu ọbara na ọ nwere ike ime ka ị gbaa ọbara ngwa ngwa.
Fọdụ nlekọta ahụike ga-adụ gị ọdụ ka ị gbanwee usoro ọgwụgwọ gị nke ndị na-edozi ọbara iji nwee ike iji ha ọnụ na ndepụta. Otú ọ dị, ọ gwụla ma a tụrụ aro ka ị ghara ịgbanwe usoro ọgwụgwọ.
Orlistat na ọgwụ ọgwụ HIV
A na-akpọkwa ọgwụ ndị a ọgwụ nje. A na-enye ọgwụ ndị na-alụso nje HIV ọgụ na-arịa ndị na-arịa ọrịa nje na-arịa ọrịa HIV (HIV) iji belata nje virus n'ihi ya na-abawanye ogo ndụ nke ndị ọrịa.
Ọgwụ ndị a gụnyere lopinavir, ritonavir, atazanavir, efavirenz, tenofovir na emticitabine.
Mgbe a na-ewere ọgwụ ndị a na ndepụta aha, a kọọrọ na ọrịa nje na-ebelata ka nje virus nje HIV na-abawanye. Ya mere, ị kwesịrị ịhapụ izere iji ndepụta aha na ọgwụ ndị na-egbochi nje HIV n'otu oge.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ijikọ ha ọnụ, a ghaghị ileba anya na nje virus nje HIV ma jiri ndepụta orlistat kwụsị ma ọ bụrụ na achọtara ibu nje ahụ ka ọ bawanye.
Mmekọrịta Orlistat na ọgwụ ọdịdọ
A na-eji ọgwụ ọdịdọ akpọrọ ọgwụ antiepileptic iji belata ihe ọdịdọ / akwụkwụ. Abụba bụ ihe dị mkpa na ndị ọrịa akwụkwụ. Nke a na - ebute uru dị ka mmetụta ọjọọ nke ọgwụ ndị a. Ọgwụ ọdịdọ ahụ gụnyere lamotrigine.
Orlistat n'aka nke ọzọ na-ebelata nsị nke abụba. Mgbe ejiri ya na ọgwụ antiepileptic, a kọọrọ na ndepụta iji belata ntinye nke ọgwụ.
Anfọdụ akụkọ ihe mere eme na-akọ na ewere aha ya na ọgwụ njide na-abawanye ihe ọdịdọ.
Orlistat mmekọrịta na cyclosporine
Cyclosporine nke a na-akpọ ciclosporin bụkwa ọgwụ ọgwụ na-egbochi ọgwụ mgbochi. A na - eji ya egbochi anụ ahụ ịjụ akụkụ ahụ mgbe a gbanyechara ya.
Mgbe ejiri ya ọnụ, ndepụta na-ebelata ọkwa nke plasma nke cyclosporine. Nke a bụ n'ihi na ndepụta nwere ike igbochi absorption nke ọgwụ ndị a.
Fọdụ ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa na-atụ aro ka ị ghara iji aha mgbe ị na-eji cyclosporine. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị dọkịta na-atụ aro ịnara cyclosporine ihe dị ka awa 3 mgbe ị gacharachara aha.
Orlistat mmekọrịta na amiodarone
Nke a na-ezo aka na ọgwụ mgbochi arrhythmic ejiri iji weghachite obi nkịtị ma na-ejigide oge na-aga n'ihu.
Egosiputara Orlistat imebi mmetuta nke amiodarone n’ime obara. mgbochi a na - eduga mmadụ n’abụghị iti obi bụ nnukwu ihe egwu ahụike.
Mmekọrịta Orlistat ya na levothyroxine
Levothyroxine bụ ọgwụ eji agwọ ọgwụgwọ nke obere ọrụ gị na-agwọkwa ụfọdụ ụdị goiters. A na-akpọ ọrụ thyroid dị ala dị ka hypothyroidism ma na-agụnye mgbaàmà ndị dị ka Ike ọgwụgwụ, akpụkpọ akọrọ, ncheta ncheta, uru bara uru, hoarseness, adịghị ike ahụ ike, ọkwa ọbara cholesterol dị elu, dị arọ karịa oge nkịtị ma ọ bụ oge ọhụụ, obere obi iti, obi ịda mba na goiters .
A kọọrọ ngalaba-nchịkwa nke levothyroxine na orlistat iji belata ogo nke levothyroxine etinye obi gị dum. A na - akọ na Orlistat ka ọ jikọtara ya na levothyroxine n'ihi ya, na - egbochi nsị ya n'ime eriri afọ. Ndị a nwere ike ibute nnukwu hypothyroidism nke nwere ike ibute nsogbu ahụike dịka enweghị ike, oke ibu, ihe mgbu, na nsogbu obi.
Mmekọrịta Orlistat na abụba-soluble vitamin
Orlistat nwere ike igbochi absorption nke ụfọdụ vitamin nwere ike soluble na ụfọdụ nri. Fatịlaịza nwere ike soluble vitamin nke A, D, E, K na beta-carotene.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ọgwụ mgbakwunye nwere ọtụtụ vitamin nwere vitamin na-agbaze abụba. A ga-ewere mgbakwunye mgbakwunye multivitamin opekata mpe awa 2 tupu ma ọ bụ mgbe ị nụsịrịchara.
Mmetụta mmetụta ndị a na-ahụkarịkarị na-eme n'ihi abụba ndị na-enweghị nri na-agafe na usoro nsị gị. Ha na-abụkarị mmetụta nke eriri afọ ebe ọ bụ na ụzọ mbụ nke orlistat bụ ọnụ na abụba ndị na-agbanweghị agbanwe na-ewepụ na feces.
Mmetụta ndị a na-ede aha na-eme n'ime izu ole na ole mbụ ị takingụ ya ma nwee ike ịla. Otú ọ dị, ụfọdụ mgbaàmà ka nwere ike ịdịgide. Mmetụta ndị nwere ike ịpụta na-emekarị ma ọ bụrụ na usoro ọgwụgwọ adịghị mma.
Enwere ike ijide mmetụta ndị a site na ịnara ndenye ọgwụ kwesịrị ekwesị mgbe ị na-agbaso ndụmọdụ dọkịta gị maka ịnọgide na-enwe calorie belatara, obere nri nwere abụba yana mgbatị.
Ngwadogwu a na-atụ aro ka a na-atụ aro bụ 120 mg were ugboro atọ kwa ụbọchị. Orlistat kwesiri ka ewere ya tupu nri dika o na - egbochi ihe dika 30% nke abuba na - eri nri. Nchịkọta dị elu dị elu adịghị eme ka mmetụta ndị dị ike karị kama ọ nwere ike iduga ụfọdụ mmetụta ndị na-adịghị mma.
Mmetụta ndị a na-ede aha gụnyere;
Ngwa ngwa ma ọ bụ ihe isi ike ịchịkwa mmegharị afọ
Loose na mgbe mgbe eriri afọ mmegharị
Udiri ma obu mmanu mmanu
Ime ma ọ bụ ikensi mgbu ma ọ bụ ọbụna erughị ala afọ
Na-agafe gas mgbe mgbe site na mmanu mmanu mmanu.
Mmetụta mmetụta ndị a dị n'elu nwere ike njọ ma ọ bụrụ na ị na-ewere abụba karịa nke ị kwesịrị ị shouldụ mgbe ị na-ede ọgwụ.
Fọdụ na-edepụta mmetụta ndị na-adịghị mma ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịme. A dụrụ gị ọdụ ka ị chọọ enyemaka ahụike ozugbo ị hụrụ mmetụta ndị a. Mmetụta ndị a na-ede aha ha nwere ike ịdaba na ọgwụ ọgwụ. Mmetụta ọjọọ gụnyere;
Nnyonye anya na oge ịhụ nsọ
Na-esiri ya ike iku ume
Oké afọ mgbu na-agaghị agabiga
Ọzịza (ọ kachasị n'ime ire, akpịrị ma ọ bụ ihu).
Ebe ọ bụ na ejikọtara ụfọdụ ọrịa imeju siri ike nke imeju na ojiji nke orlistat, hụ na ị lezie anya maka mgbaàmà nke mmerụ imeju. Kwesịrị ịkwụsị ozugbo ma chọọ enyemaka ahụike ma ọ bụrụ na ịnwee akara ngosi ndị a nwere ike imebi mmerụ imeju;
Hives ma ọ bụ nhụjuanya siri ike ma na-adịgide adịgide
Akpịrị ma ọ bụ ọgbụgbọ
Jaundice (acha ọbara ọbara anya ma ọ bụ akpụkpọ)
Ìhè na-acha odo odo / icha mmirimmiri
Na-emerụ ahụ ngwa ngwa
Ọza na nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ.
Anyị edepụtara ọtụtụ nsogbu ndị na-edekọ aha na ọbụna ihe ọjọọ metụtara ya, agbanyeghị, na-adị njikere mgbe niile ịlele mmetụta ọ bụla ị nwere ike ịnweta ma gwa ndị na-eweta ahụike gị. Jide n'aka na ị gbasoro ntuziaka nke ọma na usoro onunu ogwu na ojiji kwesịrị ekwesị nke ndepụta iji mezie ọtụtụ n'ime mmetụta ndị a.
Dị ka ọtụtụ ọgwụ, mmetụta ndị ọzọ nwere ike ịpụta na mbido ọgwụgwọ wee pụọ na iji ya eme ihe, ụfọdụ mmetụta nwere ike ịdịgide. Ddụfe ọgwụ bụ ihe ọzọ na - enyekarị aka n'ọtụtụ nsogbu, yabụ na ị gaghị ewepụ aha ndị a karịa ka akwadoro gị.
Ebee ka zụta Orlistat?
Ngwaahịa nwere orlistat na-eme na aha aha aha dị iche iche. Nke a bụ n'ihi na ndị na-edepụta aha aha dị iche iche yana ịta ahụhụ.
Obere obere nke ndepụta aha na-eme na aha njirimara aha dị ka Alli na Orlos. Enwere ike ịzụta nke a n'ụzọ dị mfe site n'aka ọtụtụ ndị na-emepụta aha ma ọ bụ ndị na-ebugharị aha. Otú ọ dị, mgbe ị na-atụle ma ọ bụ ndepụta aha zụta ya n'aka ndị ọkachamara na-enye ọgwụ. CMOAPI bụ otu n'ime ndị na-emepụta aha ma na-enye ngwaahịa dị mma. Na CMOAPI ụlọ ọrụ anọwo na-azụ ahịa ruo ogologo oge ma na-ekwusi ike ịdị mma na nke a ma ama.
Kpachara anya nke ukwuu na ọgwụ ndị ị na-azụrụ. Jiri nlezianya gụọ aha ahụ iji ghọta otú ọgwụ ọjọọ si eji ya eme ihe. Lelee maka onye na-ede aha oru ma ọ bụ na ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-ebubata ya, ụbọchị e wepụtara ya na ụbọchị imebi. Jide n'aka na ị ga-enyocha mmetụta ọ bụla egosipụtara na ịdọ aka ná ntị. Dịka ọmụmaatụ, ịdekọ ọnya imeju bụ otu n'ime ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ ihe ngosi nke Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) maka ndị ọrụ iji kpachara anya mgbe ha na-a theụ ọgwụ.
“Aha njirimara US” (PDF). FDA. Ọgọstụ 2015. Ewepụtara 18 Eprel 2018. Maka mmelite akara ngosi hụ peeji ndepụta FDA maka NDA 020766
Barbier P, Schneider F (1987). "Syntheses nke tetrahydrolipstatin na nhazi zuru oke nke tetrahydrolipstatin na lipstatin". Helvetica Chimica Acta. 70 (1): 196–202. ma ọ bụ: 10.1002 / hlca.19870700124.
Bodkin J, Humphries E, McLeod M (2003). "Nchịkọta zuru oke nke (-) - tetrahydrolipstatin". Akwụkwọ akụkọ Australia nke Chemistry. 56 (8): 795–803. ma ọ bụ: 10.1071 / CH03121.
Filippatos, Theodosios & Derdemezis, Christos & Gazi, Irene & Nakou, Eleni & Mikhailidis, Dimitri & Elisaf, Moses. (2008). Orlistat-Associated Nsogbu Ọjọọ na Mmekọrịta Ọgwụ. Nchedo ọgwụ: akwụkwọ akụkọ mba ụwa nke toxicology ọgwụ na ahụmịhe ọgwụ. 31. 53-65. 10.2165 / 00002018-200831010-00005.
Sharma, AM, & Golay, A. (2002) Nkeji edemede Mmetụta nke ịdebanye aha na-ebute ọnwụ dị arọ na ọbara mgbali elu na obi obi na ndị ọrịa buru oke ibu na ọbara mgbali elu. Journal of ọbara mgbali, 20(9), 1873–1878. doi.org/10.1097/00004872-200209000-00034.
Stylized with a lowercase a on the package, and a bar over the i (that is, “allī”), but capitalized Convention in the manual.
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Joly R, Patel IH (1995). "Nyochaa nke mmachi usoro nke orlistat, onye na-egbochi egbugbere ọnụ, n'ime ndị ọrụ afọ ofufo dị mma". J Ọgwụ Pharmacol. 35 (11): 1103-8. ma ọ bụ: 10.1002 / j.1552-4604.1995.tb04034.x. PMID 8626884.